Ny teolojia simulation ho an'ny mpianatra mandroso: Martin Vrijland
Mihamaro hatrany ireo mpahay siansa milaza fa ny simika dia izao tontolo izao. Ilay tarika malaza antsoina hoe Muse koa dia mifantoka mafy amin'io lohahevitra io miaraka amin'ny rakikirany farany. Ary rehefa manomboka mikarokaroka ny zava-drehetra, maro ireo mpikatsaka ny fahamarinana amin'ny fahamarinana dia manomboka ho lasa miahiahy. Ny fehin-kevitro dia ny tsy maintsy hahatsikaritra ny fifohazana ny fiainana amin'ny fomba simika, mba hanintonana ny singa manokana. Ity singa-tokana ity, vokatry ny transhumanism, dia mampanantena antsika ho lasa mpamorona antsika manerana izao tontolo izao. Izany no antony maha-ilaina ny manintona ilay olona mifoha ho any amin'ny harato fandriam-pahalemana.
Ho an'ireo mpamaky vaovao amin'ity tranonkala ity dia azo antoka fa mihodina tsara ho an'ny filazana fa miaina anaty simulation isika. Izany dia miteraka zava-baovao avy amin'ny New Agers ara-panahy na dia toa zavatra ho an'ny mpankafy Star Wars sy ny olona te hijery sarimihetsika SciFi. Ny olona salama dia hieritreritra hoe:Fahagagana inona, ahoana no hahatonga izany. Ny zavatra hitanao sy henonao ary fofona dia zavatra tena misy. Tsy karazana holograms na zavatra izy ireo. Adala izay!"Manolotra voalohany ireo mpamaky aho ity lahatsoratra ity (avy any ambany mankany ambony) mba hamakiana. Ity lahatsoratra ity dia natao ho an'ny olona izay efa lalindalina kokoa amin'ity lohahevitra ity.
Kanefa ny fisalasalana ilaina dia mihoatra noho ny logiciel ary koa ny lojika dia mieritreritra fa ny karazana simulation dia karazana sary masina kokoa. Niova anefa izany eritreritra izany raha vantany vao mandray mikraoskaopy ianao ary mijery akaiky kokoa ny raharaha. Ny tanjaky ny mikrosopia, ny fahitanao fa ny zava-drehetra mafy orina, avy amin'ny molekiolan'ny atôma, dia tsy hoe tena matanjaka mihitsy. Ohatra, hitanao fa misy toerana malalaka eo amin'ny atin'ny atoma sy ny elektronika; izay manodidina azy. Raha maka fitaovana fitsaboana hafa ho takalon'ny mikrosopope ianao, dia ho hitanao ny fehin-kevitra hafa tsy azo henoina. Maka ny fitaovana nampiasain'i Niels Bohr, ary ampiasainao izany dingana roa fanandramana Avy eo dia mitodika fa ny ampahany matanjaka rehetra dia tena fihetsika mavesatra alohan'ny hahitana azy. Hitanareo mihitsy aza io tranga io amin'ny karazana (izay antsoin'izy ireo) hoe 'suppositions' dia avy amin'ny fandinihana. Io 'superposition' io dia toa karazana loharanom-baovaona, satria ny baikan'ny playstation dia efa nodorana tao anaty CD ary nadika tamin'ny mombamomba ilay mpilalao fotsiny. Izany dia famaranana mivaingana!
Tsy misy mihitsy ny zava-misy mandra-pandinihana izany. "Eny ary, tena tokony ho mpandinika fikorontanan'ny fikorontanana ianao mba hino izany", Mety mieritreritra izao ianao. Tsia, tena siansa fotsiny izany. Tsy finoana izany, fa vokatry ny fanandramana naverimberina imbetsaka ary na dia nanimba tanteraka an'i Albert Einstein aza.
Fantatro manokana fa ity fanandramana ity dia mampiseho fa ny tena zava-misy (izay azontsika rehetra jerena sy hita fa azo tsapain-tanana) dia tsy mitongilana raha tsy misy mpandinika. Izany dia midika fa ny vatantsika sy ny atidoha ho an'io vatana io dia mampitombo ihany koa vokatry ny fandinihana. Noho izany dia tsy ny atidohantsika izany fa tsy ny fisainantsika izay mahatsapa fa tsy tokony hisy mpandinika ivelany.
Toy izany koa ny lalao ordinatera na PlayStation, izay anananao ny mpanatontosa eo an-tananao ary mijery ny avatar amin'ny lalao. Ny fehin-kevitro dia hoe misy mpanara-maso ivelany mihitsy. Ny fehezan-teny mahazatra indrindra amin'ity mpandinika ity dia antsoina hoe 'fanahy' ao amin'ny fivavahana. Noho ny mahamety izany, andeha isika handinika io fehezan-teny io ary hilaza fa ny fanahy dia mpanara-maso izay miantoka fa ny loharanom-baova dia mifototra amin'ny safidy an'io fanahy io ihany. Zava-dehibe ny mitadidy fa misy karazana anton-javatra izay mamaritra ny zavatra mampiaraka, toy ny ao anaty lalao an-tserasera amin'ny Internet maro karazana anton-javatra izay misy fiantraikany amin'ny zavatra ao amin'ny efijery. Voalohany, io no loharanon'ny lalao izay mametraka ny rafitra. Faharoa, misy mpilalao hafa ao amin'ny lalao izay manao karazana safidy sy hetsika. Fahatelo, mety tsy maintsy miatrika ireo avatars amin'ny lalao izay milalao anjara amin'ny lalao sy ny sisa.
Mba hahitana io hevitra io - fa ny fanahy no mpandinika ao amin'ny lalao multiplayer - tsy maintsy takanao aloha fa ny fanandramana indroa miady dia manaporofo fa tsy misy izany raha tsy voamarina. Izaho sy ianao, ity tany ity, ny seza izay ipetrahanao, izao tontolo izao izay iainanao; Tsy misy izy rehetra raha tsy voamarina. Toy ny lalao Playstation dia tsy misy raha tsy mijery ny efijery ianao ary mandeha na mamafa ny Playstation. Na izany aza, ny code rehetra dia efa mirehitra amin'ny CD. Ary amin'ny lalao multiplayer an-tserasera, ny programa manontolo dia efa ao anaty rahona eo amin'ny serivisy foibe. Tsy hahita izany anefa ianao raha tsy mamadika ny lalao. Ilaina ny manantona ny efijery anao ary mifehy ny mpitantana (joystick) ary manomboka milalao. Amin'izay fotoana izay dia hisy zavatra hiseho eo amin'ny efijery. Na izany aza, ity code ity dia teo amin'ny foibe foibe nandritra ny fotoana rehetra; na dia tsy mijery ianao aza. Na izany aza, izy io dia mihaona fotsiny eo amin'ny efijery raha mihodina ny screen ary mijery azy io. Ity zava-misy ity dia tsy mitsahatra afa-tsy rehefa mahita izany isika. Raha toa io fanahy io dia ny fanahy ary ao amin'ny rahona ny code dia manomboka tsapanao tsikelikely ilay hevitra.
Zava-dehibe ny hahatakatra fa rehefa ianao no mpandinika dia tsy midika izany fa ianao dia mandalo. Raha hitanao ny lalao Playstation, ianao no mipetraka eo amin'ny mpanara-maso. Ny fanandramana fa ianao no mpanara-maso fa tsy ny avatar ao amin'ny lalao dia midika fa ianao dia tena mandray anjara amin'ny lalao. Raha ny marina, ianao dia eo amin'ny mpanara-maso; Manana joystick ianao (ho an'ny taranaka PacMan eo anivontsika) eny an-tananareo.
Mba hahafantarana tsara ny hevitra momba ny simulation, dia mila mahatakatra ny fanandramana ara-physika ianao. Ny fotokevitra momba ny 'superposition' sy - izay antsoina hoe - ny fametahana ny vaovao vokatry ny fanamarihana, dia mitovy amin'ny avy amin'ny mpizarazara foibe amin'ny sary eo amin'ny efijery miaraka amin'ny lalao multiplayer an-tserasera. Efa eo amin'ny server ny code. Ny programa dia manana safidy safidy azo atao. Miankina amin'ny (ankoatra ny zavatra hafa) ny safidinao, ny endrik'ilay sary miseho eo amin'ny efijery. Rehefa mamadika ny lohan'ny avatar amin'ny lalao mankany ankavia miaraka amin'ny mpanara-maso ianao, dia mahita ny tontolo eto ankavia. Miankina amin'ny codeo amin'ny programanao izany. Efa nosoratana io kaody io ary mifanaraka amin'ny fitsipika fototra mifandraika amin'ny lalao. Ny sary azonao dia avy amin'ny 'superposition' (avy amin'ny 'safidy azo atao' rehetra) izay vokatry ny safidinao.
Na izany aza, satria amin'ny lalao multiplayer ianao dia mahasoa fa ny fandinanao dia mitovy amin'ny an'ny mpilalao hafa rehetra. Ny mpanamboatra an'io simulation io dia nahatonga ny fitsipiky ny fifangaroana tranga. Rehefa nanomboka nikaroka ity fitsipika ity aho, dia nanontany tena aho raha toa ka azo jerena ao amin'ny orinasan-tserasera ihany koa izany. Inona no vokatr'izany? Google dia nanangana sehatra iray ho an'ny lalao realisty fampiroboroboana an-tserasera. Ao anatin'io sehatra io dia nampidirin'izy ireo ny fitsipika momba ny 'famantaran'ny rahona'. Io fitsipika momba ny "famantaran'ny rahona" io dia manome zavatra mitovy amin'ny mpandrindra ny programa toy ny hoe 'fitontonganan'ny quantum'. Vakio ity lahatsoratra ity mba hianatra hahatakatra izany amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Noho izany raha mandinika ny tranga ara-batana ianao, dia afaka manatsoaka hevitra fotsiny fa simba ny tontolontsika. Tao amin'ny lahatsoratra maromaro no nanamafisako fa toa misy mpanavao / mpanorina 1 amin'ity simulation ity: Lucifer.
Azonao atao koa ny milaza fa ny vatantsika sy ny atidohantsika dia azo oharina amin'ny avatar ao amin'ny Playstation; Lisitry ny Playstation Lucifer. dia mijery ny amin'izao fotoana izao toe-milalao amin'ny teknolojia an-tsaha, dia toa isika momba ny hanova ny alalan 'ny atidoha sy ny fifandraisana an-cyborgs nanotechnology tsikelikely, miaraka amin'ny vatantsika sy ny atidoha ny fotoana feno tonga miankina amin'ny Internet. Izahay dia toy ny fifandraisana amin'ny rahona miaraka amin'ireo mpizara orinasa lehibe toy ny Google sy Facebook. Google ny ara-teknika lehiben'ny mpanatanteraka Ray Kurzweil milaza ataontsika momba ny 2045 dika mitovy ny tenantsika, fa koa mba hamorona tontolo nomerika tsy tena ireo. Ny tanjona faratampony dia ny mamela ny fialantsiny amin'ny biôlôjia ary ny hitohizantsika miaina anaty tontolo nomerika. Afaka ho tonga toy ny mpamorona ny tontolontsika manokana isika. Ho afaka hiaina an'izao tontolo izao isika amin'ny maha-araka ny marina antsika. Raha ny marina, ny toe-draharaha ara-teknolojia dia manome antsika ny safidy ho lasa andriamanitra mpamorona. Izany toa tsara tarehy tsara tarehy ary afaka manantena jerena ny fandrosoana teknolojika fa ny tsara indrindra dia azo ekena ara-drariny hoavy.
Raha ny tena manokana, aleoko tsy misafidy ny maha-tokana azy, satria tsy atokisako ny mpamorona ity simulation eto Losifera ity ary satria ny simulation dia miankina foana amin'ny mainframe izay mihazakazaka. Ary tsy matoky an'i Google aho, fa izaho kosa tsy matoky ny mpanamboatra an'io simulation io (Lucifer).
Ny mpikaroka Wes Penre sy ny mpiara-dia aminy Ariel Glad, izay manaraka ahy aorian'izay, dia mitaky fa afaka mandao ny famolavolan'i Luciferianina amin'ny alalan'ny karazanà matrices, avy eo isika dia miafara amin'ny universe Orion. Miteny izy ireo fa ny famolavolan'i Luciferiana (ny Universe Luciferiana) dia kapila 4% an'ny universe Orion; izay antsoin'izy ireo koa hoe KHAA. Raha tsy miditra amin'ny teny rehetra ampiasaina azy ireo, dia toa mahasoa ahy ny mijery ity teoria (mifototra amin'ny fampahalalana momba ny fikaroham-baovao sy azo antoka). Miteny izy ireo fa io universe Orion io koa dia simulation, fa izany dia simulation kokoa sy lehibe kokoa, izay ny reny no mpanjakavavy. Miteny ihany koa izy ireo fa ao anatin'ity izao tontolo izao ity isika dia ho lasa andriamanitra famoronana, izay ahafahantsika mamorona ny simulation manokana. Raha ny marina, midika izany fa misy ihany koa ny simulation ao amin'io hevitra io. Ny simulation nataon'i Lucifer dia mandeha amin'izao simba KHAA izao. Ny famolavolan'i Losifera ihany no kely dia kely kokoa ary ny 4% kopia ny an'ny KHAA ihany.
Aoka hatao hoe izany "fahamarinana", ary nilaza fa mampiseho ny Nanoritra lalana nitarika ho amin'ny ankavanana tsoa-kevitra, na izany aza, misy simulation ao anatin'ny iray simulation ary avy eo dia nanolotra ny mitovy safidy amim-pahombiazana kokoa noho isika ao amin'ny Ray Kurzweil ny singularity. Ihany isika dia mihevitra fa ny reniny ny Khaa zavatra mangoraka sy ny rafitra no tsy ratsy. Hahazo ny vintanao ve ianao?
Taorian'ny fifanakalozan-kevitra miaraka roa lahy fa nahita tokoa fa ny tokony Khaa / Orion rafitra ireny dia simulation, fa izy ireo sary an-tsaina ny fomba fijery fa tsara ny miaina ao simulations, tahaka izao fanahintsika izao ny traikefa ilaina ary mamorona fanamby. Jereo ny lahatsary etsy ambany ary ny fanehoan-kevitra etsy ambany.
Ao anatin'ny adihevitra rehetra mikasika io lohahevitra io dia tsikaritro fa mahasoa foana ny mahatsapa fa ny hevitra momba ny simulation dia tsy fampitahana, fa tokony horaisina ara-bakiteny fotsiny.
Ny soso-kevitro dia hoe simba na simika ny lozisialy sy ny (simba) simika KHAA. Raha ny marina, ny lozisiela Luciferiana dia mihazakazaka amin'ny simia KHAA (raha manaraka ny lalan'i Wes Penre sy Ariel Glad) ary misy ady koa ao amin'ny KHAA. Mbola afaka misafidy ny hankanesana any amin'io rafitra KHAA / Orion io ianao, satria fotsiny hoe manintona izany na angamba satria mahaliana fa rafitra matriarikana izany.
Ny toerana misy ahy dia hoe afaka misafidy ny hanana traikefa foana ianao, fa ny zavakanto tsy ahafantarana azy, tahaka ny tsy ahafahanao mamantatra ny tenanao amin'ny avatar ao amin'ny lalao Playstation, fa manadino anao iza ianao. Tsy midika anefa izany fa tsy afaka mianatra zavatra avy amin'izany ianao. Ny hevitra hoe ny simulation dia natao hanofanana ny fanahy dia tena azo tsapain-tanana. Afaka misafidy ny ho very ao anaty simulations isika ary hanadino tanteraka fa isika no fanahy mitandrina. Ny vintana mety hitranga dia zava-dehibe. Rehefa misafidy ny hiditra ao amin'ny singa manokana isika (izay ahafahantsika manjary mpamorona ny tontolontsika ao amin'ny Google cloud mainframe) dia mety hanadino bebe kokoa momba ny hoe iza isika (fanahy). Ny vintana mety hitranga dia mitovy amin'ny safidintsika amin'ny KHAA / Orion. Ankoatr'io simulation io koa dia afaka manjary mpamorona ny simulation manokana isika, noho izany alohan'ny ahafantaranao azy dia ho very tanteraka ianao.
Moa ve tsy mahay ny hitandrina ny fanentanana izay mitandrina ny fanahy sy ny toy izany no miverina any amin'ny niaviany? Angamba afaka, dia handray ny diplaoma, izay efa nandalo izany tena masiaka sy maharary Luciferian simulation, izay nivily tany hafa koa (Khaa / Orion) simulation (ary amin'ny lafiny iray hafa multi-mihitsy).
Moa ve isika mpamorona diplaoma nahazo diplaoma?
Ny fanontaniana manan-danja, mazava ho azy, dia mbola misy ny toerana misy ny 'fiaviana' ary ny toa ito. Iza no namorona an'io fiandoha io ary iza no tompon'io (ary iza no namorona azy io)? Mampahatsiahy foana ny horonan-tsarimihetsika Hollywood izy io, izay ny foana hatramin'izao dia ny fampiasana solika foana ho toy ny fanondroana ny fanontaniana raha toa ianao mbola ao anaty fihodinana ambany na ao amin'ny 'tontolo tany am-piandohana'. Mbola nitohy tamim-pahombiazana io tolo-dalàna io tany amin'ny tontolo simulative izay tsy tao anatin'ny rafitra ny lalànan'ny fahantrana. Fanamarihana izany fa mbola tao anaty simulation ianao.
Ariel Glad dia nanambara tamin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ilay lahatsary fa tsy te hanadino ny traikefan'ireo simulation vaovao rehetra izay azo hatsaraina amin'ny rafitra KHAA. Azoko sary an-tsaina fa rehefa najoro tamin'ny alalàn'ny rafitra KHAA ianao dia te-handeha ihany koa. Tsy fantatro raha toa ka mitana anjara toerana lehibe amin'ny maha-rafitra matriarika azy izany ary mety halaim-panahy izany (satria ny rafi-pitantanana ho an'ny patriarika dia lasibatry ny patriarika). Na dia izany aza dia manipika fa ny fiovan'ny lisansa Luciferiana dia manova endrika hatrany io matriarchika io na mankany amin'ny rafitra tsy miandany amin'ny KGB. Izany no mahatonga anao hieritreritra.
Raha ny hevitro, tsy tokony hatahotra ny tsy fahampian'ny fanamby avy amin'ny sehatra voalohany. Raha mahomby, na izany aza, ny fitsapana izany - tena ratsy - Luciferian simulation ka tsy alaim-panahy ho any amin'ny manaraka simulation, dia mety hahazo taratasy fanamarinana ny mpamorona, ary ianao kosa ho ilay Mpamorona ny simulations vaovao, izay, na ho an'ny dia manome toky fa maneho ny lesona noraisina ianao. Iany angamba ho azo antoka fa ny mpilalao ny tenany fa tsy ho very amin'ny ady dualistic rehetra, fa aza mijaly noho ny aretina, ny ady, ny fahafatesana sy ny sisa.
Rehefa lasa mahafantatra ny zava-misy fa iray ihany no simulation avy superposition noho ny fomba fijery ny fanahinao, dia afaka, fa raha ny marina dia tsy hiverina any amin'ny tany am-boalohany fa raha tsy minia mijanona ao amin'ny simulative rehetra izao. Raha ny marina, dia afaka misafidy ny hijanona ao amin'ity Luciferian simulation (ka mandehana ho transhumanism sy ny singularity), na mandeha any amin'ny simulation izay maka izao Luciferian simulation: ny Khaa / Orion rafitra (mihevitra ho manana ho kevitra ity Penre sady mandimandina marina). Mazava ho azy fa afaka mandeha ihany koa amin'ny fiaviana ianao ary misintona ireo sarin-javatra simulation izay mbola any. Ahoana no anaovanao izany?
Ny fahitana fa ianao no mpanara-maso (tsia, tsy mpandinika mandalo, fa mpandray anjara mandray anjara) no manome antoka fa manaiky ny simulation ianao ary mahatsapa fa ny fanahinao dia. Fanahy mahomby ianao rehefa mahatsapa ny maha-izy anao manokana: mpamorona nahazo diplaoma. Amin'ny fanatanterahana izany any ianao tahaka izany efa nivoaka (raha mbola mahatsapa ny simulation ny vatanao avatar).
Tags: Ariel Smooth, fisafotofotoana, Featured, Advanced, Andriamanitra, physique quantum, quantum confusion, Fizìka, atsangana hitondra, zava-misy, mpamorona, mpamorona, simulations, simulation theory, simulative, superposition, Wes Penre, WPP
Nick Lowe nanoratra hoe:
1 Septambra 2018 ao amin'ny 14: 53
Nandika ny fahadisoako ihany i Martin, tamin'ny farany, ny safidy Google Chrome naparitaka ho ahy
Noho izany misaotra betsaka noho ity artikla ity dia hamaky azy io im-betsaka kokoa aho amin'izay fotoana izay, Post, misaotra ny zavatra rehetra ataonareo rahalahy dia ankasitrahanareo..Nick Lowe
1 Septambra 2018 ao amin'ny 15: 01
Miala tsiny aho fa ny filazana fa ny solosaina mpandika teny Google dia teny amin'ny teny holandey ihany, ny fahadisoako, dia nadika anglisy ho amin'ny English.lol
1 Septambra 2018 ao amin'ny 15: 23
Misaotra an'i Nick, tena faly ianao
2 Septambra 2018 ao amin'ny 11: 46
"Ny FAMPANDROSOANA dia nanosika ny sainam-panahy tamin'ny alàlan'ny fifehezana ny Word, izay SOUND. Io VIBRATS tsara io ary ny vibrations dia ENERGY. Energy GLOWS sy mamirapiratra dia LIGHT! Ny fahazavana no dia asehon'ny elektrôna FEMALE Izay mamorona ny hovitrovitra, rehefa Ataovy anaty boribory ny Proton sy Neutron ao anatin'ny vihy. Io FITANDREMANA MAHATSIARO io dia ny fanodikodinam-pahefana na ny fitsabahana amin'ny molekiolan'ny MATTER amin'ny fotoana iray. Na izany aza, Tsy izany tsy akory TENA, eritreritra fotsiny izay mahatonga Angovo, izay glows ary niseho ho toy ny zava-drehetra amin'ny lafiny 3 angorodao zavatra izao na inona na inona endriny dia hevitra.
Ireo mpandinika luciferiana dia mikasika ny famitahana rehetra ary mitaky 'faratampony maro "ho fitaka. Ny lamaody fanesorana ny fifanjevoana dia natao hanakorontana ny olona rehetra izay te-hahatsapa ny fisafotofotoana. Mivezivezy izahay, mieritreritra ny zava-misy, ary tavela any AWE sy WONDER. Ity AWE na AHHHS ity, dia ny OZ, ary ny mpitsikilo dia ny fanesorana luciferian.
Mazava ho azy, ny luciferian fisainana, ny hevitra DINGANA, namorona ny kolikoly sy ny tsy fahalalana eo amin'ny toerana voalohany, ka izao dingana ao amin'ny Maitso TONTOLO IAINANA HETSIKA madio ny zava-drehetra izy, tao amin'ny lamaody ny Mesia Mpamonjy. Manantena, mazava ho azy, fa ny tena hevi-dravina ny olombelona dia hatrany ny hevi-dravina mifantoka amin'ny fiainany, ary malahelo tanteraka ny zava-misy ny hoe iza marina isika. Hoe iza moa isika, ny fahendrena dia State Paradisa mandrakizay, ary ny fanjakana izany fa ny luciferian egregore vondrona mpandinika maniry mifehy mandrakizay. "
2 Septambra 2018 ao amin'ny 15: 14
Fanampiny lehibe ho an'ny asanao izany ary manome fiarovana tsara ho ahy.
Hitako ny sehatra raha mandeha eo amin'ny ara-panahy amin'ny blinders, mieritreritra izahay maimaim-poana, raha ny marina dia mety efa avy amin'ny patriarika rafitra ny matriarchal rafitra, izany mety ho SANbox na Bounus ambaratonga, izay missleading
Omena fanandramana mpamorona mahafinaritra, izay mety ho very indray ny iray,
Mamantatra sy manadino ... hampiasa ny fijeriko sy ny fanaparitahanao eto aho, duble slits ary
Ny hevitra Wes, antenaina fa tsy izany no zava-misy, fa avy amin'ity tohatra ity, tsy maintsy mahafantatra isika.
2 Septambra 2018 ao amin'ny 15: 20
Fanehoan-kevitra lehibe momba an'i MindSupply, ny green movement.l dia tia it.lol
« Manaiky hanao firaisana ara-nofo amin'ny fomba ofisialy sy ny fahombiazan'ny fanjakana
Ny tsindry ao amin'ny Station Central Station amin'ny alàlan'ny 19 antitra Afgana amin'ny roa Amerikanina »
Total fitsidihana: 2.493.110
Riffian op Ny Corona Crisis Covid-19 dia mampahatsiahy ny tsimok'aretina MS Blaster tamin'ny 2003 izay nihaza an'i Bill Gates
Fakafakao op Ny Corona Crisis Covid-19 dia mampahatsiahy ny tsimok'aretina MS Blaster tamin'ny 2003 izay nihaza an'i Bill Gates
Zandi Eyes op Ny Corona Crisis Covid-19 dia mampahatsiahy ny tsimok'aretina MS Blaster tamin'ny 2003 izay nihaza an'i Bill Gates